အမေရိကန်က စစ်ပွဲကို တကယ်မတိုက်ရဲတာလား? မတိုက်ချင်တာလား? (သာကော တယောက်ချောင်ထဲမှာ ကျိတ်ငိုရမယ့်အချိန်) - Zet Star
အမေရိကန်က စစ်ပွဲကို တကယ်မတိုက်ရဲတာလား? မတိုက်ချင်တာလား? (သာကော တယောက်ချောင်ထဲမှာ ကျိတ်ငိုရမယ့်အချိန်)
ပင်လယ်ပြင်ကဘဲပြစ်မလား ဝေဟင်ပေါ်ကဘဲကစ်မလား အဲဒါနှင့်ဗျ၊ မြောက်ကိုးရီးယားစိန်ခေါ်တာကိုတောင် စစ်မတိုက်ရဲဘဲ တရုတ်ကို တိုက်ရဲပါ့မလားတဲ့။ စိန်ခေါ်တိုင်းသာ တိုက်နေရရင် ကမ္ဘာကြီးတောင် တစ်ခြမ်းပဲ့နေလောက်ပီ၊ လူမိုက်လိုခေါ်တောင်းပီး လူမိုက်လို ထွှက်လာရတယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာနိူင်ငံတွေရဲ့ စစ်ရေးမဟုတ်ဘူး၊ ခလေးအတွေးဘဲဗျ။
မြောက်ကိုးရီးယားကို ဘာလို့စစ်မတိုက်သလဲ၊ တိုက်စရာကိုမလိုတာ၊ တူတူတန်တန်လက်နက်မရှိဘူး၊ အင်အားကြီးမားလာမဲ့ ငွေကြေးအများအပြား၊ ပေါကြွယ်ဝမူ့မရှိဘူး၊ ဘယ်နိူင်ငံကိုထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ကျူးကျော်ရဲသလဲ လေလုံးထွား အမုန်းစကားဘဲပြောနေတာ၊ ရပ်ကွက်ထဲက အရူးတစ်ယောက်လို ထအော်နေတဲ့အဆင့်၊ မြောက်ကိုးရီးယား စစ်တိုက်လိုက်ပါပီတဲ့ ဘယ်မှာလဲ စစ်လျှော်ကြေး၊ သိမ်းစရာစီးပွားရေးကလည်းမရှိ၊ သူပြည်ထဲကပြည်သူတွေတောင် ငတ်နေတာ၊ ဘယ်သူက လက်သယ်ခံမလဲ၊ စစ်တိုက်သူက အရှူံးကြီးဘဲ၊
နောက်တစ်ခုက မြောက်ကိုးရီးယားရဲ့ တည်ရှိပုံပထဝီအနေအထားအရ၊ ရေငုတ်သဘော်နှစ်စီးနှင့် တင်ပြာကျတယ်။ အမေရိကန်က သွားတိုက်ရင် ကိုယ့်ထမင်းအိုးကို ကိုယ်ခွဲသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ မြောက်ရန်ကို ကြောက်ပီး၊ တောင်ကိုးရီးယားက စစ်အသုံးစရိတ်၊ဂျပန်က စစ်အသုံးစရိတ်၊ တနစ့်တစ်ပိုး နှစ်စဥ်တိုးပီးရနေတာ၊ သွားတိုက်လိုက်လို့ ရန်သူမရှိရင် ဘယ်သူက၊ကာကွယ်ရေးစစ်တပ်ကိုခေါ်ပါတော့မလဲဗျာ၊ ငါးတန်းခလေး သွားမေးရင်တောင် စစ်မတိုက်ရတဲ့အကြောင်းသိလောက်ပါတယ်နော။
တရုတ်ကိုဘာကြောင့်တိုက်သလဲ၊ တစ်နေ့တစ်ချိန် ထိန်းမနိူင်သိမ်းမရ ကမ္ဘာကြီးကျသွားမှာစိုးတာကတစ်ကြောင်း၊ အမေရိကန်နှင့်ဆင်ပြိုင်ကလာတဲ့နဂါးကြီးဟာမကြာခင်မှာစီးပွားအင်အားမကစစ်ရေးပါလွန်းမိုးလာတော့မယ်၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့တရုတ်ကြီးကိုကမ္ဘာစီးပွားစာမျှက်နှာကအပီးသတ်မောင်းထုတ်ပြစ်ချင်တဲ့အချက်တစ်ခုတည်းဘဲ၊ အဲဒီမှာတရုတ်ကြီးရဲ့လောဘ၊အနိူင် ကျင့်ဘိုကျထားတဲနိူင်ငံတွေပါလာတာကတော့ လင်ယုန်းကြီးကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်သလိုဆိုပါတော့၊ ခံလာရတဲ့နိူင်ငံ မှန်သမျှ၊ အုံကြွလာတဲ့အပြင်ဥရောပတစ်ခွင်၊ပါဝင်လာကြတဲ့ထိပါဘဲ။
တစ်ချိန်တည်းမှာဲ၊သာကောဘဝ၊ ငဗစ်ကစတော့တာဘဲဗျ၊ဒီအကြောင်းမရှိရင်လဲနောက်တစ်ကြောင်းကိုထရမ့်ကြီးကရှာပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြတ်ကြီးစားအတိုးနှင့်သိမ်းထားတာလည်းဒုနှင့်ဒဲ၊ဘယ်အရာမဆိုလက်တွဲခေါ်မယ်မရှိဘူး၊ တစ်ဝတစ်ပြဲစား၊ ပြာသာနာအစုံပေးထားသေးတယ်၊ အိပ်သွန်ဖာမောက်၊ အကုန်ကောက်ယူချင်တဲ့ သာကောဘဲလေ။ လင်းယုန်ကြီးကတော့ အကြောင်းပြချက် ကောင်းကောင်း အချိန်မနှောင်းခင်ပေါ်လာတာဘဲလေ၊ နာမည်ကတောင် ကိုဗစ်တဲ့။ ဖြစ်လိုက်ကြတဲ့ကပ်ဆိုး၊ သေလိုက်ကြတဲ့လူတွေ၊ အထုပ်နှင့်သယ်ပြစ်ရတဲ့ထိဘဲ။
ဒေါသတရား ကြီးမားစွာ ထွက်ကြ၊ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသား ဆူညံသွားခဲ့ရတဲ့ထိ၊ အမယ်၊ ရောဂါဖြစ်တုန်းဆဲဆဲ လောဘကမရပ်သေးဘူးဗျာ၊ ကမ္ဘာစီးပွားရေး ၂၀% အပိုင်ကျူံးယူတော့တာဘဲ၊ ဆိုးလိုက်တဲ့ သာကောလုပ်ရပ်။မ တော်လောဘလွန်လေသည်မှဆိုတဲ့အတိုင်း၊ ပြောချင်တာက သာကောဘဝ၊ စစ်တိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းတရားကအဲဒါဘဲ။
နောက်တစ်ခုက စစ်ဆိုတာ၊ ရေနှင့်တိုက်လို့မရ၊ ငွေနှင့်ဖိုက်ကြရတဲ့ပွဲ၊ စစ်ဖြစ်မယ်တစ်ခုကို အတိုချူပ်ပြောရရင်၊ သုံးစွဲလာတဲ့ ငွေကြေးပမာဏ၊ စစ်ချီလာတဲ့ စစ်အင်အား၊ နည်းပညာသမားခ င်းကျင်းထားတာနှင့်ဆိုင်တယ်။ ခုကြည့်လေ သုံးစွဲထားတဲ့ငွေကြေးသောက်သောက်လဲဘဲ၊ စစ်ချီလာတဲ့ အင်အား ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးထက်တောင်များနေသေးတယ်၊ ထုတ်လာခဲ့ နည်းပညာရှိသမျှ အကုန်သုံးလာနေတာ
ခြိမ်းခြောက်ရုံကတော့ဗျာ လောယာဥ်တင်သဘော်ကြီး(CVN.76)တစ်စီးအလည်အပတ်ခရီး လိုလာမှာပေါ့ဗျ၊ ကိုယ့်နိူင်ငံရဲ့ ငွေကြေးသဲထဲ လွှင့်သလို လုပ်ရပ်မျိူးကိုတော့ အမေရိကန်သမိုင်းမှာတောင်မရှိခဲ့။ နောက်ဆုံးပြောရရင် ကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွှက်အရံသင့်ထားရှိတဲ့ ဘီလျှံ(740)ကို အမေရိကန်နိူင်ငံက သမ္မတထရမ့်ကြီးကိုသုံ းစွဲခွင့်ပေးလိုက်တာကို ဘဲကြည့်တော့လေ။
စစ်မတိုက် လှည့်ပြန်ခွက်ခွက်လန်မွဲကိန်း သာကောကြီးကိုစစ်ချီမလား၊ နောင်တစ်ချိန်ခုလို သာကောကြီးနေရာ ပြန်နေမလား သူတို့တွေးထားပီးသားပါ။ သူတို့နိူင်ငံမှ ာလူတော်လူ​မော်တွေ အများဆုံးဘဲ။ မြောက်ကိုးရီးယားက စိန်ခေါ် အ​မေရိကန် တိမ်ပေါ်မလိုက်လို့ တရုတ်ကြီးကိုမတိုက်ရဲဆိုတဲ့ အတွေးမိုက်ရူးရဲ၊ ခလေးသာသာအတွေးဆိုပါတော့။
ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက် တိတိကျကျရ က်ချိန်းမသိရပေမဲ့၊ သိပ်မကြာခင် စစ်တစ်လင်း ဝင်ကြရမဲ့ကိန်းပါ၊ နွဲပီဟေ့ဆိုရင်တော့ ၊သာကောဘဝ၊ ဂလိူင်ထဲကျနေသလိုပါ့ဘဲ၊ နေရာစုံ ဒုံးကျည်ရိပ်မြုံလို ဖြစ်သွားမလားဘဲ။ ဟိုကတစ်ဂျိန်းဂျိန်း၊ဒီဘက်က တစ်ဒိန်းဒိန်း၊စရိတ်ငြိမ်းပေးကြမယ်ထင်ပါ့တယ်။ အနီးဆုံးအနေအထား၊မနက်ဖန်လား၊ တစ်ဘက်ခါလား၊ဘယ်နေ့ဖြစ်မလဲ စောင့်မျော်နေဆဲဘဲ။အဲလိုတွေးအဲလိုဘဲရေးရတော့မယ်လေ။ ဝေဟင်ပေါ်မှာကစ်မလား၊ ရေပြင်ပေါ်မှာပြစ်မလား၊ အချိန်ကအဖြေပေးသွားပါလိမ့်မယ်နော်။
← ကြားရသူတိုင်း မျက်ရည်ဝဲလောက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ရဲ့ သဒ္ဒါတရားနဲ့ ရိုင်းပင်းကူညီမှု
တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ခေတ်သစ် စစ်အေးတိုက်ပွဲကြီး ပိုပီပြင်လာပြီ (အမေရိကန် ဦးဆောင်တဲ့ စစ်စာချုပ်အဖွဲ့ ဖွဲ့တော့မည်) →